Suldaan Mohamed Suldaan Abdilqadir oo caddeeyey xisbiga uu taageerayo. Xisbigaasi waa kee? ( Halkan ka daawo ) | Awdalpress.com
Suldaan Mohamed Suldaan Abdilqadir oo caddeeyey xisbiga uu taageerayo. Xisbigaasi waa kee? ( Halkan ka daawo )
Awdalpress – London – Salaadiinta iyo oday dhaqameedyada ayaa xilligan ku mashquulsan u kala hiillinta musharraxyada u tartamaya doorashada dhawaan ka qabsoomi doonta Somaliland. Si xawli ahna waxa u socda shirarka ay oday dhaqmeedyadu kaga qayb galayaan ololaha doorashada.
Shirarkii ugu danbeeyeyna waxa wada yeeshay beelaha Habar jeclo iyo kuwa Subeer Awdal oo ka dhacay magaalada Burco. Waxana ay labadaa beelood guddoonsadeen in ay heshiiskoodii is bahaysiga ku hawl galaan, codkoodana si wada jir ah u siiyaan Musharrax Muuse Biixi oo ka soo jeeda beesha Subeer Awdal.
Suldaan Mohamed Suldaan Abdilqaadir oo isna ka soo jeeda beelaha Gar-xajis ee taageersan Musharrax Abdirahman Cirro ayaa isna ku dhawaaqay in uu yahay Waddani.
This post has been viewed 9666 times.